Etu ibudata foto Instagram, vidiyo na Akụkọ na Qoob Akụkọ | Gam akporosis
Etu esi ebudata foto Instagram, vidiyo na Akụkọ na Qoob Akụkọ
Ngwa ngwa Instagram na-emelite site na mmali na oke, mana ọ ka enweghi ihe ndị dị mkpa iji zuo oke maka ndị ọrụ niile na-aga n'ihu na-eji ya. Otu ihe ọtụtụ ndị na-ata ụta bụ ibudata foto, vidiyo na akụkọ site na akaụntụ gị.
Taa enwere ọtụtụ ngwaọrụ maka nke a, ma ọ bụ maka ngwaọrụ gam akporo yana yana Windows. Qoob Akụkọ na-ebudata ihe atọ na PC gị (Windows, Mac Os X na Linux), a na-arụ ọrụ a site na ngwa nke nweere onwe ya ma ọtụtụ puku mmadụ na-ejikwa ya taa.
A mụrụ Qoob Akụkọ mgbe enwere ọtụtụ ngwa nke na-ekwe nkwa ibudata ihe ọ bụla nke netwọkụ mmekọrịta a, agbanyeghị na ụfọdụ pere mpe. Akụkọ Qoob na-enyekwa ohere ịbanye na akụkọ ndị mmadụ na-enweghị aha na enweghị igosi akara ọ bụla na profaịlụ ndị ahụ.
Ngwa a adabeghị na gam akporo, ọ bụ ezie na anaghị achịkwa ya na ọ ga-ahụ ìhè ụbọchị ma ọ bụrụ na ọ na-ejigide usoro dị mma ọ na-enwe ugbu a. You nwere ike iwunye nsụgharị abụọ, ma ọ bụ 32 ma ọ bụ 64 ibe n'ibeIji mee nke a, nyochaa nke ahụ site na Ogwe njikwa, sistemụ na nchekwa, sistemụ na n’ikpeazụ “ụdị sistemu”.
Download Qoob Akụkọ na PC gị site ebe a
Wụnye ngwa a, nke a ga-ewe nkeji ole na ole, nye ikikere ma ọ bụrụ na ọ bụ Windows, ebe ọ bụ na ọ bụ ngwa ọ chọrọ ka ị nye ya ohere dị ka a ga - asị na ọ bụ ọzọ nke nbudata
Ẹkedori na Qoob Akụkọ ngwaNke a ga - akpọrọ gị gaa interface dị mfe, ebudatara ihe onyonyo niile na akpaghị aka ozugbo anyị banyere adreesị onye ahụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na - ebugote Androidsis Blog Instagram, ọ ga - egosi gị nlele nke ihe niile, ọ bụrụ ihe onyonyo, vidiyo ma ọ bụ akụkọ
Iji mepee ihe oyiyi niile ahụ, gafere otu n'ime ihe oyiyi ahụ wee họrọ akara ngosi nchekwa, pịa ya ma ọ ga-akpọrọ gị gaa na ụzọ mkpirisi ebe a ga-anabata ihe oyiyi, vidiyo na akụkọ ebudatara.
Ọrụ ahụ nwere njedebe, ị ka na-ebudata ihe oyiyi 37 a kwadoro na ọrụ ahụ ha niile na-aga na kọmputa anyị n’ụzọ ọsọ ọsọ, ha niile enweghị ibudata otu na otu. Akụkọ Qoob kwa ụbọchị ga - enye gị ohere ị ga - enweta ihe dịka profaịlụ 2 kwa ụbọchị ma budata foto 200, vidiyo na akụkọ. Enwere atụmatụ a na-akparaghị ókè maka ihe karịrị 30 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi ebudata foto Instagram, vidiyo na Akụkọ na Qoob Akụkọ
3 akwụkwọ ọhụrụ nke gam akporo 12 nke ụbọchị ikpeazụ ị gaghị echefu
Ihe ngosi Xiaomi Mi na 10 na Mi Note 10 Pro na-enweta mmelite nke gam akporo 11